Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » I-Ukraine kunye ne-European Union batyikitya isivumelwano se-Open Skies
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziUkreqa zaseUkraine
IsiVumelwano esiVulekileyo soBhakabhaka se-EU-Ukraine kufuneka siqinisekiswe yi-Ukraine kunye nelungu ngalinye lelungu le-EU ukuze liqale ukusebenza.
Isivumelwano seNdawo yoLuntu kulindeleke ukuba sivule iUkraine ukuya kwiindlela ezinamaxabiso aphantsi kunye nokunyusa ukhenketho.
Okwangoku, iUkraine inesivumelwano senkonzo yamazwe amabini kwilizwe ngalinye le-European Union.
Isivumelwano esitsha ne-EU sicacisa ukuba izithintelo kwinani leenqwelomoya ziya kususwa.
I-European Union (i-EU) kunye ne-Ukraine batyikitye isiVumelwano seNdawo yokuHamba ngeeNqwelomoya esiya kuthi simisele indawo yokuhlangana ngenqwelomoya, utshilo umongameli wase-Ukraine.
Isivumelwano seNdawo yokuHamba ngeeNqwelomoya, esaziwa ngokubanzi njengesiVumelwano esiVulekileyo soBhakabhaka, kulindeleke ukuba sivule iUkraine ukuya kwiindlela ezinamaxabiso aphantsi kunye nokunyusa ukhenketho, ngenxa yokuphumeza okunyanzelekileyo kwemigangatho yaseYurophu kunye nemithetho kwicandelo lothutho lomoya.
Okwangoku, iUkraine inezivumelwano ngeenkonzo zomoya kumazwe amabini nelizwe ngalinye le-EU. Baseta izithintelo kwinani labaphethe kunye neenqwelo moya zeveki. Oku kwenza ukuba kube nzima kubaphathi abatsha ukuba bangene kwiinqwelomoya ezithandwayo.
Isivumelwano esitsha kunye EU icacisa ukuba izithintelo kwinani labaphathi kunye neenqwelomoya ziya kuphakanyiswa. Nawuphi na umphathi wenqwelomoya uya kuba nakho ukubhabha kwiindlela ezidumileyo, hayi kuphela ngabodwa. Oku kuthetha ukuba iinqwelomoya zexabiso eliphantsi ziya kufumana ithuba lokungena kwintengiso.
Ryanair, enye, sele ibhengeze "ukwandiswa okukhohlakeleyo" eUkraine nje ukuba ilizwe lijoyine imakethi yeenqwelo moya ezingavulekiyo, ngezicwangciso zokuvula iinqwelomoya kwizikhululo zeenqwelo moya eziyi-12 zaseUkraine endaweni yesi-5 yangoku, kananjalo nokuvula iinkonzo zasekhaya.
Kunye neenqwelomoya ezintsha, abakhweli banokulindela iindaba ezimnandi ngakumbi - amaxabiso etikiti kulindeleke ukuba ehle ngenxa yokhuphiswano olwandileyo kunye nokuphela kobukumkani bodwa kwiindawo ezithandwayo. Kananjalo, amaxabiso aya kuncitshiswa ngenxa yesivumelwano esinika ilungelo kuyo nayiphi na inkampani yezokuqhuba abakhweli kwizikhululo zeenqwelo moya.
Ngaphandle kwabakhweli, izikhululo zeenqwelo moya zaseUkraine kulindeleke ukuba zivune izibonelelo kutshintsho. Bazakufumana iinqwelomoya ezininzi kwaye banendlela enkulu yokuhamba yabakhweli. Oku kuthetha ukuba izikhululo zeenqwelo moya ziya kuba namathuba amaninzi otyalo-mali kunye nophuhliso.
Enye into edityanisiweyo yesivumelwano sabakhweli baseUkraine kukwaziswa udibano lwaseyurophu izithethe kunye nemigangatho yokuhamba ngenqwelomoya yaseUkraine.
Umsitho wokutyikitya ubuzinyaswe nguMongameli waseUkraine uVolodymyr Zelensky, uMongameli weBhunga laseYurophu uCharles Michel, kunye noMongameli weKhomishini yaseYurophu u-Ursula von der Leyen.
Isivumelwano, esibhalwe kwi-23th Ukraine-EU Summit eKiev, siza kuvula iimakethi zomoya zaseUkraine kunye ne-EU kwaye siqinise ukhuseleko lomoya, ukugcwala komoya, kunye nokhuselo lokusingqongileyo, utshilo u-Mongameli.
IsiVumelwano esiVulekileyo se-EU-Ukraine kufuneka siqinisekiswe yiUkraine nganye udibano lwaseyurophu Ilungu lelizwe ukuze kusebenze.